नेकपा विवाद निर्णायक मोडतिर, आजको बैठकमा आउलान् ओली ? – NawalpurTimes.com
नेकपा विवाद निर्णायक मोडतिर, आजको बैठकमा आउलान् ओली ?
प्रकाशित : २०७७ पुष ५ गते ८:५०
५ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुने/नहुने यकिन नभएको उनको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने शीर्ष तहमा सहमति गरेर मात्र बैठक गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शनिबार प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका ओलीले पनि दुवै नेताको आरोपत्रको बारेमा सहमति कायम गरेर मात्र बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए ।
अब नेकपा बैठक विस्तारै निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गराउने दाहाल–नेपाल समूहको तयारी छ । अहिले संसद अधिवेशन नचलेका कारण अहिले नै कुनै कदम चाल्दा ओलीले त्यसको काउन्टरमा नयाँ अध्यादेश जारी गर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूह संसदसम्म कुर्ने पक्षमा छन् ।
निर्णायक कदमका लागि नै कार्यकर्तालाई मानसिक रुपमा तयार गराउन दाहाल–नेपाल समूहले कार्यकर्ता भेला गरिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले निर्णायक कदमको तयारी गरिरहँदा ओलीले भने केही नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । यस अगाडिझैं उनले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।